Manohy mahazo ny tsena ny Mac raha ampitahaina amin'ny PC | Avy amin'ny mac aho
Ny tsenan'ny varotra PC dia ao anaty doldrum ary araka ny angon-drakitra azo avy amin'ny consultant IDC dia misy fihenan'ny 11,5% ny varotra ankehitriny raha oharina tamin'ny taona lasa mifandraika amin'ny fandefasana PC eran'izao tontolo izao amin'ny telovolana voalohany 2016. Na izany aza Nahazo ny tsena i Apple, tombanana ho 60,6 tapitrisa ny totalin'ny fandefasana PC mandritra ny telovolana voalohany amin'ity taona ity.
Fandefasana PC amin'ny iray amin'ireo tsena lehibe, Etazonia, nianjera 5,8% sisa tavela amin'ny 13,6 tapitrisa vondrona amin'ity telovolana voalohany ity. Ireo olana amin'ny isan'ny singa nalefa ireo dia mety noho ny ahiahy lehibe kokoa amin'ny toe-karena manerantany, fa ny fitaovana sasany amidy dia tsy misy fanavaozana maimaimpoana ny Windows 10 na ny mpampiasa mangataka ny fitaovan'ny fivoriany manokana nefa tsy manantona tsara -malaza.
Raha ny filazan'ny talen'ny fikarohana IDC, Linn Huang:
Ny fangatahana solosaina PC any Etazonia dia mbola miadana ihany, fa amin'ny lafiny iray dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny tetezamita isika. Mandritra ny taona dia misy ny tampon'ny varotra noho ny fividianana orinasa ny orinasa ary koa ny sehatry ny fanabeazana izay matetika omena mandritra ny telovolana faharoa. Misy aza ny mpividy sasany izay mbola mandinika ny tetezamita na ny fifindra-monina mankany Windows 10 ankoatry ny fiakaran'ny ChromeBooks amin'ny fampianarana ambaratonga voalohany sy faharoa, ka tsy tokony hanaitra isika.
Mikasika ny angon-drakitra manerantany voaangona, afaka jerentsika ny fomba nahatratraran'i Dell 4,2% tamin'ny fizarana tsena manerantany 14,9% ambonin'ny ASUS sy ireo orinasa fanta-daza hafa, na izany aza, nilatsaka tamin'ny varotra ny HP na dia mitazona ny laharana faharoa ao aorinan'ny Lenovo aza izy. Amin'ny lafiny iray, Apple dia miakatra Laharana faha-4 amin'ny latabatra miaraka amin'ny fizarana 7,4% tena mitovy amin'ny an'ny ASUS manerantany, na dia nisy aza io fiakarana io noho ny fivarotana ny fitaovany tany Amerika Avaratra, ho hitantsika raha azo tazonina na hatsaraina mandritra ny taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Manohy mahazo ny tsena ny Mac raha oharina amin'ny PC
Alefaso ny diagnostika an'ny Apple TV 4 miaraka amin'ity fika tsotra ity amin'ny alàlan'ny Siri Remote